Hindiya oo Pakistan ka dalbatay inay sii dayso duuliyaha xilli dhibaatada Kashmir ay cirka isku sii shareerayso | Biyoguurenews.com
Home Wararka Hindiya oo Pakistan ka dalbatay inay sii dayso duuliyaha xilli dhibaatada Kashmir...
Hindiya oo Pakistan ka dalbatay inay sii dayso duuliyaha xilli dhibaatada Kashmir ay cirka isku sii shareerayso
Maxaa ku dhacay duuliyaha?
Wasaaradda warfaafinta ee Pakistan ayaa waxa ay daabacday – walow markii dambe ay tirtirtay – muuqaal ay ku muujinayso duuliyaha oo indhaha laga xiray kaddib markii la qabtay, kaas oo la maqli karo isagoo biyo codsanaya.
Muuqaal markii dambe la daabacay, ayaa la arki karaa Abhinandan oo shaah cabaya isagoon indhaha u xirnayn una muuqanayay in jirkiisa la soo nadiifiyay.
Waxa uu ka jawaabay dhowr su’aalood oo ay ka mid ahaayeen magaciisa, jagada uu milateriga ka hayo iyo inuu ka soo jeedo “koonfurta shishe”, ka hor inta uusan diidin inuu xog dheeraad ah bixiyo markii la waydiiyay howlgalkii uu u socday: “Inaan taasi kuu sheego ma ahan.” ayuuna yiri.
Afhayeenka milateriga Pakistan Janaraal Asif Ghafoor ayaa sheegay in duuliyaha “loola dhaqmay si waafaqsan shuruucda milateriga”.
Maxay ku saabsanayeen duqeymaha cirka?
Janaraal Ghafoor ayaa waxa uu sheegay in diyaaradaha dagaalka ee Pakistan ay “duqeymo” dhanka cirka ah ay Arbacadii ka fuliyeen Kashmir-ta ay Hindiya maamusho, kuwaas oo aanan ilaa iyo hadda kala caddeyn waxa ay ahaayeen.
Kaddib laba diyaaradood oo kuwa dagaalka Hindiya ah ayaa weerrarkaasi ka jawaabceliyay, iyagoo ka soo tallaabay xadka Kashmir kala qeybiya. “Diyaaradahayagu diyaar ayey ahaayeen labadii diyaaradoodna waa ay soo rideen,” ayuu yiri.
Waxa uu intaasi ku daray in hal duuliye oo Hindi ah uu gacanta ku dhigay milateriga Pakistan. Saraakiisha ayaa markii hore sheegay in duuliyayaasha la qabtay ay laba yihiin oo midkood isbitaalka loo dhigay.
Wax sharaxaad ah kama uusan bixin sababta ay tiradu isu badashay.
Wasaaradda warfaafinta ee Pakistan ayaa sidoo kale waxa ay barteeda Twitterka soo dhigtay wax ay ku sheegtay muuqaal laga duubay mid ka mid ah diyaaradaha dagaalka Hindiya ee la soo riday.
Previous articleCohen oo ka warbixiyey madaxweyne Trump Qareenkii hore ee madaxweyne Donald Trump, Michael Cohen ayaa maanta guddiga ka tirsan Aqalka Wakiilada u sheegay in madaxweynaha uu yahay “nin neceb dadka madow, beenlow iyo qaa’in ah”
Next articleKhabiir Maraykan ah oo Ka Faalooda Siyaasadaha Afrika ayaa Shabakadda American Enterprise Institute u sheegay muhiimada aay u leeday USA Aqoonsiga Somaliland